Ogaden News Agency (ONA) – Weeraradii bisha barakaysan oo gawaadhi badan lagaga gubay cadawga
Weeraradii bisha barakaysan oo gawaadhi badan lagaga gubay cadawga
CWXO ayaa dhagta dhiiga u daray in ka badan 36 askari iyo dhaawac intaa gaadha, islamarkaana gubay qaarna naafeeyay gaadiidka ciidanka cadawga.
Waxay wararakii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhay wariyaha ONA u jooga X/dhexe, sheegayaan in CWXO ay ku qaadeen guluf weerar ah oo horleh bishan barakaysan ee Ramadaan (Ogosto), weerarkaas oy ku gaadhsiiyeen ciidamada Wayaanaha khaasare balaadhan oo isugu jira naf iyo saad. Waxay sidoo kale kula wareegeen hub iyo saanad ciidan oo laxaad leh.
Dagaalada oo ahaa kuwa si habsan loo soo qorsheeyay oo hadafkii laga lahaa laga gaadhay ayaa u kala dhacay sidan;
1/8/2011 dagaal xoogle oo ka dhacay Ardaayowayne oo ku taal buuralayda Qaali ee deegaanka Gunagado waxaa cadawga lagaga dilay 10 askari waxaanana lagaga dhaawacay 5 askari oo kale.
4/8/2011 weerar maalinimo oo ay CWXO ku qaadeen Laanjaleelo waxay ciidamada cadawga kaga dileen 3 askari waxaana laga dhaawacay 5 kale.
5/8/2011 dagaal ka dhacay Afarirdoodka Caado waxaa cadawga lagag dilay 4 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
6/8/2011 Carrojiifka oo ka tirsan deegaanka Danood dagaal ka dhacay waxa ciidamada cadawga lagag dilay 4 askari waxaana lagaga dhaawacay 2 kale.
7/8/2011 dagaal si fiican loo qorsheeyay oo ay ciidamada wadaniga xoraynta ogaadeenya ku qaadeen ciidamo cadaw ah oo ku sugnaa Aloosane oo ka tirsan dagmada Fiiq waxaa dhagta dhiiga loo daray 7 askari waxaana lagaga dhaawacay 5 kale.
9/8/2011 mir ciidanka cadawga lagu qaaday tuulada Caado waxaa lagaga dilay 2 askari 3 kalena waa lagaga dhaawacay.
10/8/2011 dagaal qadhaadh oo ka dhacay Dhabbajiriso oo ka tirsan degaanka Birqod waxaa maeeshiyada tplf lagaga dilay 8 askari waxaananan lagaga dhaawacay 9 kale.
14/8/2011 Ukati oo katirsan Gabriile weerar lagu qaaday waxaa ciidanka cadawga laga furtay afar qori oo AK47 iyadoo wax dagaalihi uusan dhici.
14/8/2011 dhabagal lagu sameeyay ciidanka cadawga deegaanka Danood waxaa lagaga dilay 3 askari 3 kalena wa lagaga dhaawacay.
Sida uu nasoo gaadhsiiyay wariyaha X/dhexe waxaa jira kamiin loo galay ciidamada cadawga kuwaas oo aan wali la ogaan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay waxayna ka kala dhaceen Boodhlay oo ka tirsan Higlalay, Dhakaabaxaro oo ka tirsan Aware Balanbal oo ka tirsan degmada Qabridahar, Waryuugle oo ka tirsan degmada Dhagaxbuur, Dhagaxle , iyo Galaalshe.
15/8 2011 waxaa lagumiray ciidanka cadawga dagmada Gabriile ee gobalka Nogob, faahfaahinta khasaaraha dagaaladan dib ayaan idiinka soo sheegi doonaa.
Dhanka kale waxaa jira gaadiid ay ku gubeen CWXO deegaano kala duwan baabuurtan oo ahaa nooca ay adeegsadaan ciidamada ayaa iyaga iyo wixii saraa laga dhigay danbas. Hawlaha gaadiidka lagu gubay ayaa u kala dhacay sidan;
4/8/2011 waxaa hal gaadhi iyo wixii saaraa lagu gubay Cawsmawaaye oo ka tirsan deegaanka Birqod
8/8/2011 Cabdi ganay oo ka tirsan degmada Fiiq waxaa lagu gubay halbaabuuur iyo wixii saraa
9/8/2011 wadada u dhaxaysa Galaalshe iyo Jigjiga waxaa lagu gubay hal baabuur iyo wixii saraa
Dhanka kale waxaa jira baabuur uu cadawgu lahaa oo lagu naafeeyay kamiin ay u galeen kuwaas oo noqday kuwa hawl gab ah. Goobaha lagu naafeeyay waxay kala yihiin Dhabajiriso oo ka tirsan deegaanka birqod iyo Alaaboyaray oo ka tirsan deegaanka Ceelwayne ee degmada Dhanaan. Tirade baabuurta halkaa lagu naafeeyay Ceelweyne ayaa gaadhaysa saddex baabuur oo kuwa ciidanka ah oo kala ahaa 4 iyo 12kii bishan Ogosto.